ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုမော်လ်တာတွင်တည်ထောင်ခြင်း - မလတီတွင် LLC
သင်မော်လတာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လည်းမော်လတာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
Million Makers Malta သည်ဖောက်သည်များအားမော်လ်တာနှင့်နိုင်ငံ ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ကမ်းလွန်တည်နေရာများနှင့်မော်လ်တာမှလွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်မော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမှာစာရှိလျှင်) အတွက်ကုမ္ပဏီ၏စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်း။
သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်မော်လတာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
မော်လ်တာအတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ မော်လ်တာအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ မော်လ်တာအတွက် Virtual နံပါတ်၊ မော်လ်တာအတွက် CRM Solutions၊ မော်လ်တာအတွက် virtual office၊ မော်လ်တာအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီ 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏မော်လတာတာတာတာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုရယူပါ။
သင်၏ Malta ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုရှာဖွေပါ
မော်လတာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်
မော်လတာကျွန်းသည်မြေထဲပင်လယ်တွင်တည်ရှိပြီးကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်မျှသာသိသိသာသာသိသိသာသာကျွန်းများ၏စုရုံး, ကျွန်းစု၎င်း၏ရှည်လျားသောနှင့်လေပြင်းမုန်တိုင်းသမိုင်းမှတဆင့်မြေထဲပင်လယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မြင့်တက်ဥရောပနှင့်ပိုမိုထူထောင်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြားအရောင်းအဝယ်၏တိုးတက်မှု၏တိုက်ပွဲများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းယူဆ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ။
မော်လ်တာတွင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသည်သင်၏နိုင်ငံအားမော်လ်တာရှိသူတို့၏အဖွဲ့အစည်းကိုခိုင်မာအောင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ၀ န်ထမ်းမဟုတ်သူများကိုအဓိကထားသောအချက်များဖြင့်အမြတ်ထုတ်ရန်သင့်အားစွမ်းအားပေးနိုင်သည်။ လာမယ့်လာမယ့်လာမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများမှမော်လ်တာကကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အဓိကအားသာချက်များဖြစ်ကြသည်။
မော်လ်တာတွင်ကော်ပိုရိတ်အခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုအပြည့်အဝဖော်ညွှန်းသည့်အစီအစဉ်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်အား၊ Maltese အဖွဲ့အစည်းမှပေးသောကိုယ်ပိုင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားကိုအမြတ်အစွန်းရရှိသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံး ၀ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစေသည်။ ကော်ပိုရိတ်အကျိုးခံစားခွင့်ကနေနှစ်ဆအခွန်အကဲဖြတ်။ ယခုအချိန်တွင်မော်လတာနိုင်ငံ၌အခွန်အကဲဖြတ်ခြင်း၏ပုံမှန်နှုန်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်၏ ၃၅% သာကျန်ရှိနေသော်လည်းထိုအဖွဲ့အစည်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ၅/၇ ခုမှပေးသောမည်သည့်အခွန်ကိုမဆိုလျှော့စျေးအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည် အဖွဲ့အစည်း၏ ၀ င်ငွေအမျိုးအစားအပေါ်တွင်မှီခိုခြင်း၊ ၆/၇ မှ ၇ / ၇ သည်များသောအားဖြင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅% သို့မဟုတ် ၀.၀ ရာခိုင်နှုန်းသီးခြားရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအသားတင်စရိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခွန်နှစ်ဆကောက်ခံခြင်းလျှော့ချရေးကိုလစာတွင်အာမခံချက်ပေးပြီးလျှော့စျေးပေးရမည့်နေ့မှနောက် ၃ ပတ်အကြာတွင်ပေးဆောင်ပါကလျှော့စျေးလျော့သွားနိုင်သည်။
ယူရို ၁,၁၆၅ ၏အခြေခံကမ်းလှမ်းမှုရှိသောမော်လ်တာတွင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်သည်။ ၂၀% ကိုအခြေချသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမော်လ်တာရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အခြေခံငွေအရင်းအနှီးသည်ယူရို ၂၄၅ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြေခံမှတ်ပုံတင်ကြေးမှာယူရို ၂၄၀ ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးယူရို ၁၀၀ နှင့်အနည်းဆုံးယူရို ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချဒေသတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏!
စာရွက်စာတမ်းများအပေါ် Duty ကနေခြွင်းချက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြီးစီးသောမော်လတာအသင်းများသည်အစီရင်ခံစာများ၏တာ ၀ န်မှကင်းလွတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်း၏ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများတိုးချဲ့ခြင်းသည်တာဝန်မှဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မော်လ်တာသည်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (၅၀) ခုကိုလက်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကမော်လ်တာ - ရုရှားနှစ်နိုင်ငံအခွန်အကောက်ဆိုင်ရာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအားယခုမှ စ၍ တစ်နှစ်အစပြုသင့်သည်။
မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Malta ကိုတည်ထောင်ခြင်း၊ Malta ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Malta တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်မော်လ်တာရှိ setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ပေးပြီး၊ သင်၏နေရာလွတ်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုမော်လ်တာတွင်ငှားရမ်းရန်ကူညီပေးသည်၊ မော်လ်တာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ virtual နံပါတ် Malta၊ မော်လ်တာတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မော်လ်တာတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ မော်လ်တာတွင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ CRM Solutions၊ တရား ၀ င်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ မော်လ်တာရှိအိုင်တီဖြေရှင်းမှု၊ မော်လ်တာတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မော်လ်တာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မော်လ်တာရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
မော်လတာတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - မော်လ်တာနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဖြေများကိုပံ့ပိုးပေးပြီး၊ မော်လ်တာမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အပါအ ၀ င်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောဝန်ထမ်းများကိုမော်လ်တာတွင်ဖြည့်ဆည်းရန်ကူညီသည်။ မော်လ်တာရှိကုန်ပစ္စည်းများအရောင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ မော်လ်တာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ virtual နံပါတ်များ၊ မော်လ်တာမှာနိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ မော်လ်တာရှိစီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ မော်လ်တာမှာဘဏ္financialာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ မော်လ်တာရှိ CRM Solutions၊ မော်လ်တာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးနှင့်မော်လ်တာရှိငွေကြေးအရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ၊ မော်လ်တာအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှု၊ မော်လ်တာရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ မော်လ်တာရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မော်လ်တာရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်မော်လ်တာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်
မော်လ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ မော်လတာအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာမော်လ်တာနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအရစကေးများကြောင့်မော်လ်တာတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း မော်လ်တာ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မော်လ်တာ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း မော်လ်တာ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မော်လ်တာ
Malta Business ကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများမော်လ်တာ
Malta စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Malta ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
မော်လတာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္မဏီအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
●ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ Malta အတွက် ၀ န်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၁၆၀၀
●မော်လတာမှာကုမ္ပဏီတည်ထောင်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၁၂၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ မော်လတာတွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ခံမှုကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းအောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်ခြင်းလက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊
သင်သည်မော်လတာတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသရင်းမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးကပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင်သည်မော်လတာတွင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Private Limited မှတာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ Malta အတွက် Merchant Account
မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Private Limited Liability ကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီခုတ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်မော်လ်တာ၌တည်၏
သင်မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ချင်လျှင်မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မော်လ်တာကုမ္ပဏီ (သို့) အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြီးဘက်မလိုက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်။ မော်လ်တာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်မော်လ်တာရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ မော်လ်တာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်မော်လ်တာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်မော်လ်တာမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့်မော်လတာ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုမော်လ်တာတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကမော်လ်တာအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်သောအကူအညီများပါ ၀ င်သည့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်မော်လ်တာအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ မော်လတာနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
မော်လ်တာရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ မော်လ်တာ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် မော်လ်တာ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်မော်လ်တာ၌တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်၊ သင်၏မော်တာတာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့်မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြံပေးများနှင့်သင်၏မော်လ်တာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအကြံပေးများနှင့်သင်၏ privacy ကိုအရေးကြီးသည်။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင် - LLC မော်လ်တာ၌မှတ်ပုံတင်
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုမော်လ်တာအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်“ မော်လ်တာ၌အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီအတွက်မော်လ်တာ၊ LLC တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်
မှတ်ပုံတင်တွင်ကုမ္ပဏီအမည်အမည် Malta ။
မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီအတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မော်လ်တာ၊ LLC ရှိမော်လတာနိုင်ငံရှိသက်သေခံလက်မှတ်စာအုပ်တွင်ဝေမျှပါ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ၊ မော်လ်တာရှိ LLC တွင်ရှိသောလီမိတက်လီမိတက်မှပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, မော်လ်တာအတွက် Malta / LLC အတွက်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / Malta တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီ၊
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည်မော်လ်တာတွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုထားသည့်မော်လ်တာ၌ခွင့်ပြုချက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers ရှိကျွန်ုပ်တို့မော်လီကျူးရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်လိုင်စင်မပါသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ မဲနှိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းတွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ မော်လ်တာရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ မော်လ်တာရှိဘဏ္basedာရေးနှင့်ကုန်စည်ကိုအခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ မော်လ်တာ၌လဲလှယ်, မော်လ်တာအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
သင်မော်လ်တာရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်မော်လ်တာ၌လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရယူရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
မော်လ်တာနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်နိုင်ငံ ၅၀ အပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်မှုအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများမော်လ်တာတွင်တိုက်ရိုက်သာမက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်မော်လ်တာရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလွန်ကြီးမားသည့်အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မော်လ်တာနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခုတို့ကဲ့သို့သောဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
မော်လတာရှိ Corporate Services | Santa Venera ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | Valletta အတွက် Corporate န်ဆောင်မှု
မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မော်လ်တာ၌ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မော်လ်တာအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ, မော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မော်လ်တာအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မော်လ်တာအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ, မော်လ်တာအတွက်မော်လ်တာအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မော်လ်တာအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ, မော်လ်တာအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မော်လ်တာရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်, မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မော်လ်တာရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မော်လ်တာရှိကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
မော်လတာရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Santa Venera ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Valletta အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
မော်လ်တာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီမော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် မော်လ်တာ.
အကောင့် Outsourcing မော်လ်တာအတွက်
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုသင်မော်လ်တာတာတွင်သင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို မော်လတာမှာ။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံ Malta ကို
HR အတိုင်ပင်ခံ ပေးအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုဝန်ထုပ်ကိုမော်လ်တာတွင်ဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ အသင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သောမော်လ်တာကုမ္ပဏီ နှင့်လည်းလူသိများမော်လ်တာနှင့်အမေရိကန်အပါအဝင် 107 နိုင်ငံများ, "အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"မော်လ်တာအတွက်
မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ မော်လ်တာ.
မော်လတာတွင် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်မော်လ်တာကနေ။
မော်လ်တာရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ သင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်မော်လ်တာတွင်အထောက်အပံ့များကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်၊
Virtual Number - Malta အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် နှင့်မော်လ်တာရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းမှုများ၊ မော်လ်တာရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်မော်လတာရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်မော်လတာနိုင်ငံမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း မော်လ်တာ မော်လ်တာတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မော်လ်တာ, မော်လ်တာရှိ CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Malta ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
တစ် ဦး ချင်း၊ စတင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်မော်လ်တာတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်မော်လ်တာတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသည်။ ဖောက်သည်များ၏ ဦး စားပေးမှုကိုမော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်၎င်းတို့အားမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားခြင်းတို့ကြောင့်မော်လ်တာတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီတည်ထောင်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းမော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှမော်လ်တာနိုင်ငံရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီကိုမော်လတာနိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့မှု | LLC မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင် IBC မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင် llp မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင် IBC ကုမ္ပဏီမော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင် မော်လတာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | LLC မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်မော်လ်တာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်း Malta တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta တွင်ရှိသည့်ကမ်းလွန် LLC၊ Malta တွင် Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Malta LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Malta LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Malta LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Malta Offshore LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Malta Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မော်လ်တာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Malta IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Malta IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Malta IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Malta Offshore IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Malta ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်မော်လ်တာတွင် llp ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်း Malta တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာတွင် llp တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန် llp ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန် llp တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Malta llp ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Malta llp မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta llp ထည့်သွင်းခြင်း၊ Malta ကမ်းလွန် llp ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Malta ကမ်းလွန် llp မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မော်လ်တာရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာ၌ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Malta IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Malta ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်မော်လ်တာရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုမော်လ်တာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Malta စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Malta စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Malta ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Malta ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာရှိဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုမော်လ်တာတွင်တည်ထောင်သော llc ကုမ္ပဏီနှင့်လည်းနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့သည်။ Мальတာတွင် llc ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မော်လ်တာရှိ Offshore llc ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ပေါင်းစည်းခြင်း, Malta llc ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Malta llc ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Malta llc ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Malta Offshore llc ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Malta Offshore llc ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုမော်လတာတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC တွင် Malta ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကို Malta တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ llp Malta တွင်မှတ်ပုံတင်ရန် IBC ကုမ္ပဏီကိုမော်လ်တာတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ မော်လ်ဒိုက်၌စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် llc ကုမ္ပဏီကိုမော်လတာတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မော်လ်တာမှကုမ္ပဏီမှမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Venera မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Venera မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Venera မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Valletta ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Valletta မှဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Valletta မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Valletta မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မော်လ်တာအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Santa Venera တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Valletta အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမော်လ်တာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအောင်မြင်မှုရရှိကြသည်, သူလည်းအဖြစ်လူသိများ, မော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့်မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များ, ကျနော်တို့ Santa Venera ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ, အောက်ပါမြို့ကြီးများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များအတွက်ထောက်ခံပါတယ်အတွက် Santa Venera၊ Santa Venera ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Santa Venera ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Santa Venera ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Santa Venera ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Valletta ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Valletta ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Valletta ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၊ Valletta ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Valletta ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
မော်လတာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Santa Venera တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Valletta တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ကပေးအပ်တာကမော်လ်တာမှာစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုမော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ မော်လ်တာမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့မော်လတာမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Santa Venera မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ Santa Venera တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Santa Venera ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Santa Venera ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Santa Venera ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Santa Venera ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Valletta ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Valletta ရှိ Valletta ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Valletta ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Valletta ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
မော်လတာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Santa Venera တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Valletta တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
မော်လတာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Santa Venera တွင် Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ Santa Venera တွင် setup ကုမ္ပဏီ Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ၊ Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ Valletta တွင် Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ Valletta တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ ၀ င်ပါ။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာကုမ္ပဏ်ီမော်လ်တာတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ Santa Venera တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Valletta တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
မော်လ်တာတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မော်လ်တာတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌လည်း၊ Santa Venera တွင်နေထိုင်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ , Santa Venera တွင်နိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက် Santa Venera တွင်မှတ်ပုံတင်၊ Valletta တွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Valletta ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့်နိုင်ငံခြား။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Malta | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Santa Venera | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Valletta
မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ မော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု၊ မော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ၊ မော်လ်တာမှာမှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေမော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျတယ်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်မော်လ်တာအတွက်။
စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Santa Venera ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးနှုန်းချိုသာသော Valletta ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
မော်လ်တာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Santa Venera တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Valletta တွင်ထည့်သွင်း
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား LLC မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန် IBC မှတ်ပုံတင်မော်လ်တာ | llp မှတ်ပုံတင်ခြင်း Malta | IBC ကုမ္ပဏီမော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင် | မော်လတာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC မော်လတာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်?
ပုဂ္ဂလိကပိုင်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီကိုမော်လ်တာတွင်တည်ထောင်ပါ မော်လ်တာအတွက် LLC Incorporate IBC ကိုမော်လ်တာတွင်ထည့်သွင်းပါ llp Malta တွင်ထည့်သွင်း | IBC ကုမ္ပဏီကိုမော်လ်တာတွင်ထည့်သွင်းပါ မော်လတာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ မော်လ်တာမှာရှိတဲ့ Incorporate llc ကုမ္ပဏီ
မော်လတာရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ မော်လ်တာရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ မော်လ်တာရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမော်လ်တာသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်သုံးသင့်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ မော်တာတာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများစုဆောင်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်လူသိများသောမော်လ်တာရှိအရည်အသွေးမြင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းအင်းများကြောင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုလည်းပေးသည်။ မော်လ်တာတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုမော်လ်တာတွင်နှင့်မော်လ်တာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကိုပေးသည်။
မော်လတာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်စာရင်းကိုင် | မော်လ်တာ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်စာရင်းကိုင်
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်မော်လ်တာတွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအား Santa Venera ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Valletta တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမော်လ်တာမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
သင်သည်မော်လတာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်, မော်လ်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာလည်းမော်လ်တာတွင် Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Venera သည် Santa Venera တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Valletta တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Valletta အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
မော်လတာတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Santa Venera တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Valletta တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဒုတိယ ၀ န်ကြီးချုပ်ရုံးနှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
DOI - ပြန်ကြားရေးဌာန - မော်လတာတာ
Il-Ministeru ta 'l-Affulur Barranin ta' Malta- နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန။
အမျိုးသားစာရင်းအင်းရုံး - NSO
စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အသေးစားစီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
စွမ်းအင်နှင့်ရေစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ကြီးဌာန
Destination Malta - ခရီးနှင့်ခရီးသွား Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
မော်လ်တာ၏ Megalithic ဘုရားကျောင်းများ
မော်လတာနှင့် Gozo အတွက်ပွဲတော်
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - မော်လတာနိုင်ငံ
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - မော်လတာတာ
ဓနသဟာယ - မော်လတာနိုင်ငံ
FAO - မော်လတာနိုင်ငံ
Human Rights Watch - မော်လတာနိုင်ငံ
နယ်စပ်မရှိသတင်းထောက်များ - မော်လတာ
Akbank TAS, မော်လတာဘဏ်ခွဲ www.akbank.com
Valletta plc ၏ဘဏ် www.bov.com
BNF ဘဏ် plc www.bnf.bank
ဥရောပဘဏ် NV www.crediteurope.com.mt
Credorax ဘဏ်လီမိတက် www.credorax.com
ECCM ဘဏ် plc www.eccm.com.mt
Ferratum ဘဏ် plc www.ferratumbank.com
Garanti BBVA မော်လတာဘဏ်ခွဲ www.garantibank.com
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်မော်လ်တာရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ မော်လ်တာ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ခဲယမ်းတွေ၊ ကြေးစား၊
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်မော်လ်တာတွင်းမှဖြစ်စေ၊
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမော်လ်တာဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်၊
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမော်လ်တာနှင့်ပြင်ပမှမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ မော်လ်တာနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ဆိုင်သောနျူကလီးယားပစ္စည်းများ၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊
●အစားထိုးမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်မော်လ်တာအတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုများအပါအ ၀ င်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မလတ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုမော်လ်တာအတွင်းမှလည်းကောင်း၊
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုမော်လ်တာနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်မော်လ်တာနှင့်ပြင်ပမှမော်လ်တာကိုမပေးပါဘူး။
●မော်လ်တာအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်မော်လ်တာပေါ်မှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်မော်လ်တာအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် မော်လ်တာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် မော်လ်တာ, မော်လ်တာ ဘဏ်အကောင့်, မော်လ်တာ ယုံကြည်မှု မော်လ်တာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု မော်လ်တာ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ မော်လတာအတွက်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-malta/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-malta/